Amnesty International hoogganoonni KFO fi gaazexeessitoonni hidhaman hatattamaan akka hiikaman gaafate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Amnesty International hoogganoonni KFO fi gaazexeessitoonni hidhaman hatattamaan akka hiikaman gaafate
Mootummaan Itoophiyaa Oromoota angawoota paartii Kongiresii Federaalawaa Oromoo (KFO) fi gaazexeessittoota daandii fi mana isaaniitii guuree hidhatti darbe hunda haalduree tokkoon maletti akka gadi lakkisuuf Amnesty International (AI) waamicha dhiyeesse. Hoogganoonni KFO fi namoonni biroos badii tokkoon maletti hidhamanii gidiraa addaddaaf saaxilamaa kan jiran ta’uu ibsa gabaasni Amnesty International.
Amnesty International akkaataan Baqqalaa Garbaa, Dajanee Xaafaa, Geetachoo Shifarraa, Dirribii Ergaa, Yonataan Tarreessaa fi Fiqaaduu Mirkanaa itti hidhamanii fi mana hidhaa keessattis ittiin qaban kan hedduu isa yaachise ta’uu ifa godheera. Mana hidhaa keessatti mirgi isaanii ni sarbama, lubbuun isaaniis balaaf saaxilama sodaa jedhu qaba AI.
Erga hiriirri mormii nannoo Oromiyaa Sadaasa 12, 2015 eegalee kaasee namoonni dhibba heddutti laakkayaman bifa suukkanneessaadhaan ajjeefamuu fi kumaatamni ammoo madaayuu tuqeera ibsi Amnesty International.
Amnesty’n kan ragaa baye hiriirri Oromiyaa keessatti geggeeffame nagaa qabeessa ture. Tankaarfiin humnoota woraanaa garuu ajjeechaa, ukkaamsa fi hidhatti guuruu ture. Ummata hidhaa fi gidiraa sadarkaa kanaaf kan saaxile mirga hiriira bayuu isaaniitti fayyadamuu fi gaafii haqaqabeessa hiriira bayuudhan gaafachuu isaniiti. Ummata hiriira nagaa baye irratti tankaarfiin kana fakkaatuu fudhatamuu hedduu qaanfachiisaa fi mootummaan Itoophiyaa ukkaamsaa ta’uu isaati kan ibsi Amnesty International mul’isu.
Hawaasni addunyaa angawoota KFO, gaazexeessitootaa fi namoonni hidhaman biraas haalduree tokkoon maletti mootummaan Itoophiyaa akka gadi lakkisuuf dhiibbaa barbaachisu akka godhu gaafate. Mootummaan Itoophiyaa ummata nagaa irratti tankaarfii garajabeenyaa fudhachuu irraa akka dhaabatuu fi gaa’gama hanga ammaatti gayes qaamni wolaba ta’e qoratee kanniin yakka raawwatan seeraaf akka dhiyaatan godhuu irratti hawaasani addunyaa tattaafii cimaa godhuu qaba jedha AI.
Hawaasnii addunyaa, jechuun dhaabbiileen mirga namaaf falmanii fi biyyoonni Dhihaa, gocha mootummaa Itoophiyaa balaaleffachaa fi dhiibbaa irratti godhaa jiru. Mootummaan garuu gochaa badii raawwatame waakkachuu, xiqqeessee dhiheessuu fi tasgabbiin deebi’eera jechuudhaan milquuf tattaafii godhutti jira; hanga ammaatti itti milkaayuu dhabus. Hanga ajjeechaan dhaabatuu fi kan hidhame hundi hiikamutti qabsoon eegalme itti fufuu qaba.
Previous articleGodina Arsii Lixaatti ummanni halkan-guyyaa qabsotti jira; Agaaziin godinicha Baadimmee fakkeesseera
Next articleArsiin Dhihaa ammatti guutummatti bilisummaa dhadhamutti jirti